Myanmar Globe - News For You !
အဝေးပြေး ညကားတွေစီးရင် လမ်းမှာ ညအိပ်ရမှာလား၊ ဘယ်နေတွေမှာ ဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ ဆိုသူများအတွက်
အဝေးပြေး ညကားတွေစီးရင် လမ်းမှာ ညအိပ်ရမှာလား၊ ဘယ်နေတွေမှာ ဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ ဆိုသူများအတွက် အဝေးပြေး ညကားတွေစီးရင် လမ်းမှာ ညအိပ်ရမှာလား၊ ဘယ်နေတွေမှာ ဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ ဆိုသူများအတွက် လတ်တလောမှာ အဝေးပြေးညကားတွေစီးရင် လမ်းမှာ ညအိပ်ရမှာလား၊ ဘယ်နေတွေမှာ ဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ ဆိုပြီး သိချင်နေကြတဲ့ ခရီးသွားတွေအတွက် ခရီးစဉ်အလိုက် လမ်းမှာညအိပ်ရနားကြတဲ့ […]
ထိုင်းလေပိုင်နက်သို့ ဝင်လာသည့် တိုက်လေယာဉ်မှူးမှာ မြန်မာမဟုတ် ရုရှားလူမျိုးသာဖြစ်ဟု ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြ ပြော
ထိုင်းလေပိုင်နက်သို့ ဝင်လာသည့် တိုက်လေယာဉ်မှူးမှာ မြန်မာမဟုတ် ရုရှားလူမျိုးသာဖြစ်ဟု ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြ ပြော ထိုင်းလေပိုက်ထဲသို့ ကျူးကျော်ဝင်လာသည့် မြန်မာလေတပ် တိုက်လေယာဉ် MiG – 29 အား မောင်းသူမှာ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်၊ ရုရှားလူမျိုး ဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် (KNDO) ဗဟို စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြက ပြောဆိုကြောင်း […]
ကုလ ဟာ အာဏာမဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်‌ ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပြော
ကုလ ဟာ အာဏာမဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်‌ ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပြော (ဘာသာပြန်) Fox News၊ ဇူလိုင် ၂။ ကုလ မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိ‌ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်က အာဂျင်တီးနား အမျိုးသားသတင်းဌာနနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်စဉ်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ စပိန်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ယင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ ကပ်ရောဂါဘေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု နဲ့ […]
နိုင်ငံကျော် မသန်စွမ်း အဆိုတော် ပိုင်သက်ကျော်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက CDM ထောက်ပံ့မှုဖြင့် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင် ၃ နှစ်ချမှတ်
နိုင်ငံကျော် မသန်စွမ်း အဆိုတော် ပိုင်သက်ကျော်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက CDM ထောက်ပံ့မှုဖြင့် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင် ၃ နှစ်ချမှတ် ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ပိုင်သက်ကျော်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက CDM ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်ထားကြောင်း ပိုင်သက်ကျော်၏ မိတ် ဆွေက […]
ပေါချောင်အောင် ဆယ်တန်းအောင်သူများတက်ရန် ရောသုတ် တက္ကသိုလ်တခု စကစ တည်ဆောက်နေ
ပေါချောင်အောင် ဆယ်တန်းအောင်သူများတက်ရန် ရောသုတ် တက္ကသိုလ်တခု စကစ တည်ဆောက်နေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရရုံးတွေတည်ရှိတဲ့ နေပြည်တော်မှာ ဘက်စုံတက္ကသိုလ်တခု တည်ဆောက်နေတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကို စကစဥက္ကဋ္ဌ မင်းအောင်လှိုင် က ဇူလိုင်လ(၁) ရက်က သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နေပြည်တော် ပြည်နယ် အကယ်ဒမီ […]
တရုတ်ချေးငွေကြောင့် လာအိုနိုင်ငံ အကြွေးပြဿနာနဲ့ကြုံ
တရုတ်ချေးငွေကြောင့် လာအိုနိုင်ငံ အကြွေးပြဿနာနဲ့ကြုံ လာအိုနိုင်ငံဟာ လမ်းတံတားအပါအဝင်ခြေခံအဆောက်အဦးတွေကိုအကြီးအကျယ် ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် တရုတ်အပေါ်ကြွေးမြီအများအပြားတင်ရှိနေပြီး၊ အကြွေးပြန် မဆပ်နိုင်တော့မယ့်အန္တရယ်ရှိနေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ လာအိုနိုင်ငံဟာပြည်ပကြွေးမြီအများအပြားကိုပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်လောက်တဲ့နိုင်ငံခြား အရံငွေအလုံအလောက်မရှိတဲ့အတွက် ကြွေးမြီပြန်မဆပ်နိုင်မယ့်အန္တရယ်ရှိတယ်လို့ဇွန် လထဲတုန်းက အမေရိကန်အခြေစိုက် စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာစောင့် ကြည့်အကဲ ဖြတ်ရေးအဖွဲဖြစ်တဲ့ Moody ကပြောဆိုထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ဧပြီလထုတ်စာရင်းတွေအရ လာအိုနိုင်ငံဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း […]
အပြင်မှာ ဈေးတက် ဝယ်ရခက်နေသည့် စက်သုံးဆီ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းထံတွင် လုံလောက် ပိုလျှံနေ
အပြင်မှာ ဈေးတက် ဝယ်ရခက်နေသည့် စက်သုံးဆီ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းထံတွင် လုံလောက် ပိုလျှံနေ နိုင်ငံအတွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေ အရင်နှစ်တွေကထက် ပိုမြင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပြည်တွင်းသုံးစွဲဖို့ လုံလောက်တဲ့အပြင် အရန်စက်သုံးဆီတွေကိုပါ သိုလှောင်ထားနိုင်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်း စက်သုံးဆီဈေးတွေ စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး 92 တလီတာကို […]
လ ကို ကြယ်ဖောက်မယ့် ဖြစ်စဉ်အပါအဝင် ၂၀၂၂ ဇွန်လအတွက် မကြာမီ လာတော့မယ့် ထူးခြားဆန်းပြား အာကာသဖြစ်စဉ်များ….
လ ကို ကြယ်ဖောက်မယ့် ဖြစ်စဉ်အပါအဝင် ၂၀၂၂ ဇွန်လအတွက် မကြာမီ လာတော့မယ့် ထူးခြားဆန်းပြား အာကာသဖြစ်စဉ်များ…. (၂၀၂၂ ဇူလိုင်လအတွက် အာကာသဖြစ်စဉ်များ) ၂၀၂၂ ခု ဇူလိုင်လ အတွင်းမှာတော့ စူပါမွန်းလပြည့်၊ လကို အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖောက်ခြင်း၊ ကြယ်ကြွေခြင်း အစရှိတဲ့ အာကာသဖြစ်စဉ်တွေ စောင့်ကြိုလို့နေပါတယ်။ သို့သော်လည်း […]
နေတိုးက တရုတ်နိူင်ငံကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်စာရင်းသွင်းလိုက်ပြီ…
နေတိုးက တရုတ်နိူင်ငံကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်စာရင်းသွင်းလိုက်ပြီ… နေတိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုအဖြစ် သမိုင်းတလျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဘေဂျင်းရဲ့မူဝါဒတွေက၎င်းရဲ့အကျိုးစီးပွား၊ လုံခြုံရေးအပြင်စံတန်ဖိုးတွေကိုစိန်ခေါ်နေတယ်လို့ နေတိုးအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂျန်းစတိုတန်ဘတ်ကယမန်နေ့ ကပြောသွားပြီးဒါကြောင့်နေတိုးကတရုတ်နိုင်ငံကိုလာမဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း၎င်းရဲ့မဟာဗျူဟာဦးစားပေးတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ်စာရင်းသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားပါတယ်။ မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက် အထူးခြားဆုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုအရှိဆုံးအဖြစ် ရုရှားနိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဘေဂျင်းရဲ့စစ်ရေး ရည်မှန်းချက်တွေ၊ထိုင်ဝမ်အပေါ်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ပြောဆိုမှုတွေနဲ့မော်စကိုနဲ့ပိုမိုနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ စနစ်ကျတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “နျူကလီးယားလက်နက်၊အိမ်နီးချင်းတွေကို အနိုင်ကျင့်တာ၊ထိုင်ဝမ်ကိုခြိမ်းခြောက်တာ၊သူ့နိုင်ငံသား တွေကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်တာ၊ရုရှားရဲ့ လိမ်ညာမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကူဖြန့်တာ၊တရုတ်က နျူကလီးယားလက်နက်တွေအပါအဝင်သူ့ရဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေပါတယ်” လို့ […]
တံတားသစ်ကြီးကြောင့် အိမ်နီးချင်းမြန်မာထက် အပြတ်သာသွားတော့မယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်
တံတားသစ်ကြီးကြောင့် အိမ်နီးချင်းမြန်မာထက် အပြတ်သာသွားတော့မယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဖွင့်လိုက်တဲ့တံတားက တစ်ကယ့်ကို မသေး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ အရှည်လျားဆုံး တံတားဖြစ်လာတဲ့ Padma Bridge ။ ကဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ တရုတ်သတင်းတွေဖယ်ပြီး အယ်လ်ဂျာဇီးယားကရေးတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ လေ့လာကြည့်ပါစို့။ ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံနီးပါး အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်ထားတဲ့ […]